Puntland: Wasaarada qorshaynta oo shaacisay dhaqangalka xeerka xog-Aruurinaha (Muuqaal) – Radio Daljir
Puntland: Wasaarada qorshaynta oo shaacisay dhaqangalka xeerka xog-Aruurinaha (Muuqaal)
Juunyo 8, 2020 2:00 g 0
Kulanka shaacinta xeerka xog aruurinaha iyo tirakoobka Puntland kaasoo ay hore u meel mariyeen golayaasha dowladu Madaxweynuhuna saxeexay dhamaadkii sanadka 2019 ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe.
Xeerkan oo kusoo baxay faafinta rasmiga ah ee dowlada ayaa ujeedadiisa ugu weyn lagu sheegay awoodsiinta waaxda statistikada ee wasaarada qorshaynta, iskaashiga caalamiga ah iyo horumarinta dhaqaalaha ee Puntland oo loo sugayo awoodda ururinta, isuduwidda, soosaaridda, falaqaynta iyo shaacinta Tira-koobka dadka, macluumaaadka dhaqaalaha, arrimaha bulshada, hawlaha guud iyo xaaladda ay markaa ku sugantahay Puntland.
Munaasibad ay kasoo qaybgaleen in ka badan 40 agaasime oo ah agaasimayaasha guud iyo agaasime waaxeedyada wasaaradaha Puntland, masuuliyiin ka socdey Hay’adaha dowliga ah ee madaxa banaan iyo Hay’adaha maxaliga ah ayaa lagu faahfaahiyey xeerkan iyo muhiimada uu leeyahay.ka hadlay.
Xubnaha farsamo ahaan kasoo shaqeeyey diyaarinta xeerkan ka hor intii aan la geyn golaha wasiirada kadibna baarlamaanka loo gudbin oo ka socdey wasaarada qorshaynta ayaa kasoo qaybgalayaasha u sharaxay in ka badan 40 qodob oo xeerkani ka kooban yahay.
Wasiirka wasaarada Qorshaynta, iskaashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xaange ayaa si rasmi ah u shaaciyey dhaqan gelinta xeerkan oo si guud looga baahin doono Puntland oodhan.
Taliyaha Cusub ee Ciidanka kenya oo Muqdisho tagay (Sawiro)